Ifriizi Ndidi PB Miripu Igwe Mmiri - China Amico
Usoro PPP PIPE
Usoro HDPE PIPE
Usoro PE-RT PIPE
Usoro PB PIPE
Azụmahịa na usoro
Ifriizi Nnọọ PB Igwe Mmiri Mmiri
Amico PB ọkpọkọ Njirimara 1, Nrụ ọrụ nke mmiri na-arụ ọrụ kwụsiri ike, na-eguzogide corrosion, na-eme ka ezughi oke nke ọkpọkọ ígwè dị n'akụkụ a. 2, Ọ dị mfe ịgbada ma ọ bụ gbazee ọkụ ka ọ bụrụ ọdịdị siri ike karị, ma nwee ezigbo mkpakọ iji jikọta na ọkpọkọ, ọ naghị adị mfe ịtọpụ. 3, Chekwaa itinye ego - itinye ego na mbu buru ibu, mana ọnụego arụmọrụ dị ala, enwere ike weghachite isi obodo itinye ego na obere oge. . 4, Igwe na-agbanwe ọkụ n'okpuruala na-eji akwa polyethylene dị elu. Ndụ ọrụ maka 50 afọ ...
Ọdụ ụgbọ mmiri: Ningbo ma ọ bụ Shanghai
Oge Paymentkwụ Paymentgwọ: TT ma ọ bụ LC
Ika: Amico ma ọ bụ OEM
Ogologo: Coil ma ọ bụ eriri Pipe dị ka arịrịọ
Agba: Ivory, Agba ntụ ma ọ bụ dịka arịrịọ
Kpọtụrụ anyị Budata ka PDF
Njirimara Amico PB
1, ịrụ ọrụ kemịkalụ mmiri ahụ kwụsiri ike, na-eguzogide corrosion, na-eme ka ezughi oke nke ọkpọkọ ígwè dị n'akụkụ a.
2, Ọ dị mfe ịgbada ma ọ bụ gbazee ọkụ ka ọ bụrụ ọdịdị siri ike karị, ma nwee ezigbo mkpakọ iji jikọta na ọkpọkọ, ọ naghị adị mfe ịtọpụ.
3, Chekwaa itinye ego - itinye ego na mbu buru ibu, mana ọnụego arụmọrụ dị ala, enwere ike weghachite isi obodo itinye ego na obere oge. .
4, Igwe na-agbanwe ọkụ n'okpuruala na-eji akwa polyethylene dị elu. Ndụ ọrụ afọ 50.
5, Nchedo gburugburu ebe obibi na ịchekwa ike: ojiji nke ọkụ eletrik, enweghị usoro ikpo ọkụ, dị ka gburugburu ebe obibi, mwepu adịghị ọcha; Achọghị iji ụlọ elu dị jụụ, enweghị ebe nkuku dị n'èzí, emela ka okpomoku daa ọkụ gburugburu ya,
Enweghị mmetụta nrụpụta ọrụ ọkụ, ọ dịghị mkpọtụ; Ewepula ahihia nke ala, n’ebibila mmiri di n’ime ala; Orụ ọrụ na-akwụ naanị 40 ~ 60% maka ntụ oyi ikuku ọdịnala.
1. Ego ala ike na mmetụta gburugburu ebe obibi - sistemụ ikuku na-eji ọkụ eletrik na-erughị 25-50% karịa ikuku kpo oku ma ọ bụ sistemụ ikuku. Nke a pụtara obere ume achọrọ site n’ọkụ mmanụ ọkụ na-emebi gburugburu.
2. Mmiri ọkụ Na-ekpo ọkụ ma ọ bụ nke dị ọnụ ala - n'adịghị ka usoro kpo oku na ngwa nju oyi ọ bụla, ikuku mmiri ikuku nwere ike inye mmiri ọkụ na-enweghị mmiri site na iji ngwaọrụ akpọrọ "desuperheater".
3. Nkasi Obi Afọ dum na - agbado ọbụlagodi okpomoku na udu mmiri n’ime ụlọ gị dum nwere oke mkpọtụ.
4. Ike mgbanwe - usoro mgbapụta ikuku nke ikuku na - enye ohere ka emee mgbanwe ma nwee ike ịwụnye ya na ọnọdụ ọhụụ na nzụlite.
5. Aesthetics dị mma - sistemụ ikuku dị mfe izo, anaghị achọ ụlọ elu jụrụ oyi, wepụsịa akụrụngwa ụlọ, enweghị ikike nke mgbapụta na mmezi na-aga n'ihu, akwụkwọ ikike ụlọ dị mma, ikwe ka ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na ndị nwe ụlọ na-eme atụmatụ maka ihe owuwu ụlọ na-atọ ụtọ karịa. ahịrị elu ụlọ.
6. Mmezi dị ala - ebe akụkụ akụkụ nke sis sisitemu - pip pip - dị n'okpuruala ma ọ bụ mmiri dị n'okpuru mmiri, enwere obere mmezi achọrọ.
7. Okpomọkụ Okpomoku na Okpomoku: - enwere ike igba okpomoku ma o bu kpoo okpomoku di iche-iche n’otu oge, ya bu, enwere ike ibuga okpomoku n’ulo komputa n’ogwegulu nke okpomoku iji kpo oku n’ulo ulo.
8. Anwụghị ike - na-enweghị akụkụ ọ bụla na-emegharị emegharị, akụkụ ndị a na-echekwa n'ime ụlọ, usoro ikpo ọkụ nke mbara ala na-adigide ma bụrụ nke a tụkwasịrị obi nke ukwuu. Pipbọbọ anyị nwere oge ndụ mmadụ ruru afọ iri ise ma ọ bụ karịa.
Ebe Si Malite:
Amico ma ọ bụ OEM
Dị ka ndị ahịa rịọrọ
12.5 Ogwe, 16Bar, 20Bar
Nkịtị mgbidi ọkpụrụkpụ:
Afọ iri ise dịkarịa ala n'ọnọdụ ọnọdụ nkịtị
Ọrụ Ibe （mm ） Ibu ibu （ kg / m）
25mm * 2,3 x 4M 0.165
32mm * 2,9 x4M 0.263
40mm * 3,7 x 4M 0.418
25mm * 2,8 x 4M 0.195
2.5Mpa 20mm * 2,8 x 4M 0.150
Ajụjụ: Gịnị bụ akụrụngwa?
A: 100% dị ọcha ma ọ bụ akụrụngwa ọhụrụ sitere na Basell, enweghị recycles
Ajụjụ: Gịnị bụ MOQ gị?
A: Dabere na nha dị iche. Biko lelee anya na ịre ahịa ndị ahụ.
Ajụjụ: Gịnị bụ ikike mmepụta? Ma ọ bụ oge nnyefe?
A: Dịkarịsịrị ụbọchị 15 nke otu akpa 40HQ
Ajụjụ: Gịnị bụ ọdụ ụgbọ mmiri mgbe niile?
A: Ningbo ma ọ bụ Shanghai
Ajụjụ: Gịnị bụ ịkwụ ụgwọ gị?
A: 30% ala ịkwụ ụgwọ, nguzozi megide BL Detuo ma ọ bụ Lire Cable
Ajụjụ ：you nwere ike imepụta dabere n'ihe nlele ahụ?
A: Ee, anyị nwere ike mepụta site n’omume gị ma ọ bụ ihe osise gị.
Ajụjụ: you na-anwale ngwongwo gị niile tupu nnyefe gị?
A: Ee, anyị nwere nnwale 100% tupu izipu anyị
Ajụjụ: Gini bu atule ihe nlele gi?
A: Nnukwu n'efu dị
Ajụjụ: Gini mere ị họọrọ anyị?
(1) Ezigbo ngwaahịa na-arụpụta ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi.
(2) Iso ndị ahịa azụ ụwa ọnụ na ịmara ahịa nke ọma.
(3) A ga-enwe afọ ojuju ọrụ ọhụụ. A ga-aza nsogbu na nzaghachi ọ bụla na obere oge.
Gara aga: Polybutylene Pipe maka Nweta Mmiri
Ọzọ: 3 ma ọ bụ 5 Layer EVOH PB Pipe maka ụlọ ọkụ
Nweta ọnụ ahịa zuru ezu
Pipe PB maka Inye Mmiri
PB Nwoke eriri Tee
Ply Poutbutylene Pipe
Pipe PB 3 ma ọ bụ 5
Piye polyethylene Maka inye ha mmiri
PB Grey Agba Pipe
Adreesị: No68 East Tonghe Road, Luotuo Town, Ningbo, China
Ekwentị: + 86-574-86590890
Onye Mkpọtụrụ: Emily
© nwebisiinka - 2017: Ikike niile echekwabara. - Ike site na Globalso.com